TOP DHAGAYSO : Dhismaha Dalada Guud ururada dhalinyarada Soomaaliya oo Muqdisho looga hadlayo. | Monday, June 26th, 2017	Home
TOP DHAGAYSO : Dhismaha Dalada Guud ururada dhalinyarada Soomaaliya oo Muqdisho looga hadlayo.
Dec 19, 2015 - jawaab	Magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya ayaa loo fadhiyaa shirar looga tashanayo dhismaha dalada guud ee qaranka Soomaaliya.
Ururadda dhalinyarada ee ka qayb galaya shirarkaasi looga tashanayo dhismaha daladaasi waxaa ka qayb galaya dhalinyaro ka kala socota Maamulada Puntland’Jubbaland iyo Galmudug kuwaas oo doonaya inay helaan dalad ay ku midaysanyihiin kuna hadasha Afka Dhalinyarada Soomaaliya ilaa heer Qaran.
Aways Axmed Sandheere Gudoomiyaha ururka dhalinyarada Puntland oo Radio Gaalkacyo waraysi siyey ayaa sheegay inay Puntland dhalinyaradeeda ka go’antahay in lagu soo xulo habka degmooyinka dhismaha Daladan oo qofku uu ku yimaado tartan hab degmo ah.
Wali Waxaa Magaalada Muqdisho uga socda Dhalinyarada Shirar lagu doonayo in lagu dhiso Daladaasi iyadoo maanta loo fadhiyo qaabka ugu wanaagsan ee loo dooran karo gudoomiyaha Daladaasi guud ee heer qaran Soomaaliya.